Midho Qaadista Tiir
Cadaadiska Cadaadiska Cadaadiska Sare
Nadiifinta Gudiga Cadceeda
Cirifka Nadiifinta Daaqada
Maxay Yihiin Macaamiisheena
Kaarboon Fiberka VS. Tuubbada Fiberglass-ka: Kee Fiican?
Ma taqaan farqiga u dhexeeya kaarboon-kaarboonka iyo fiberglass-ka? Oo ma ogtahay in midkood kan kale ka fiican yahay? Fiberglass waa hubaal inuu ka weyn yahay labada qalab. Waxaa lagu abuuray iyadoo dhalaalaysa galaaska oo lagu soo saarayo cadaadis sare, ka dibna la isku darayo waxyaabaha ka soo baxa waxyaabaha leh ...
Fiirsada kaarboonku waxay ku beddeleysaa aluminium dalabyo badan oo kala duwan waxayna sameyneysay tobannaankii sano ee la soo dhaafay. Fiilooyinkaas waxaa lagu yaqaan xooggooda iyo adkaanshahooda gaarka ah waana kuwo aad u fudud. Xadhkaha fiilooyinka kaarboonka waxaa lagu daraa maadooyin kala duwan si loo abuuro isku dhafan ...
Waa maxay Tubooyinka Kaarboonka Fiirshadu?
Tuubooyinka fiber-ka Kaarboon Kaarboon Qaabdhismeedka embriyaha ayaa waxtar u leh dalabyo fara badan. Sidaa darteed, waa inaysan layaab ku noqon in astaamaha u gaarka ah tuubbooyinka fiber-ka kaarboon ay iyaga ku dhigaan baahi sare oo warshado badan leh. Aad iyo aad u badan maalmahan, tuubooyinka fiilooyinka kaarboonku waxay beddelaan birta, titanium, ama ...
Kaarboon Fiber biyo lagu quudiyo ulaha ku habboon nadiifinta daaqadda maanta
Maanta daaqada daaqada iyo nadiifinta xirfadleyda ah waxay leeyihiin teknoolojiyad ay heli karaan iyaga oo sanado kahoreysa tiknoolajiyadda oo laga joogo toban sano kahor. Teknoolojiyada cusub waxay u isticmaalaan fiber-kaarboolka biiyaha lagu quudiyay, tanina waxay ka dhigtay shaqada nadiifinta daaqadda inaysan sahlaneyn oo keliya laakiin ay badbaado tahay. Biyaha loo yaqaan 'Water Fed Poles' waa ...
Qalab noocee ah ayuu nadiifiyaha daaqaddu u baahan yahay?
Nadiifinta daaqaddu maahan hawl caadi ah hadda. Runtii waxaa loogu talagalay xirfadlayaal haysta qalab iyo qalab sax ah oo ay ku nadiifiyaan daaqad kasta. Haddii aad rabto inaad nadiifiso daaqadaha gurigaaga ama inaad furto adeegga nadiifinta daaqadda, waa lagama maarmaan in la ogaado waxyaabaha lagama maarmaanka u ah iyo qalabaynta ...
Ku dhowaad 15 sano oo waayo-aragnimo wax soo saar ah waa hubinta tayada alaabteenna.
Daxizhuang, Yangting Town, Degmada Huancui, Weihai City, Shandong, China